Ndị Briten chere na ekwesịrị ịga n'ihu na-eyi mkpuchi ihu na ụgbọ elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ndị Briten chere na ekwesịrị ịga n'ihu na-eyi mkpuchi ihu na ụgbọ elu
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • nzukọ • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
N'agbanyeghị mbelata nke mmachi, ọtụtụ ndị mmadụ ka na-eche na ọ bụ ihe ziri ezi na ihe ziri ezi iyi mkpuchi ihu n'ụgbọ elu, kwekọrọ n'ụkpụrụ nke ọtụtụ ụgbọ elu.
Atọ n'ime mmadụ anọ n'ime ndị okenye UK na-eche na ihe mkpuchi ihu kwesịrị ịga n'ihu na-eyi ndị njem n'ụgbọ elu, dịka nyocha wepụtara taa (Monday 1 Nọvemba) site na WTM London.
Enwere nkwekọrịta sara mbara n'ofe niile dị iche iche, mana ọ bụ ndị karịrị 65s bụ ndị na-achọkarị ịhụ ka edobere iwu ahụ, na-ekpughe Akụkọ Industrylọ Ọrụ WTM, wepụtara na WTM London, ihe omume zuru ụwa ọnụ nke ụlọ ọrụ njem, nke na-ewere ọnọdụ n'ọdịnihu. ụbọchị atọ (Monday 1 – Wenezde 3 Nọvemba) na ExCeL – London.
Mgbe a jụrụ ya: Ọ dị gị ka a ka na-eyi ihe mkpuchi ihu na ụgbọ elu? 73% zara ee - dị elu karịa 14% ndị ekwenyeghị. 13% fọdụrụ kwuru na ha ejighi n'aka.
Otu ihe karịrị 65s bụ akụkụ nke ọha mmadụ kacha nwee nkwado, ebe 82% na-ekwu na ekwesịrị iyi ihe mkpuchi n'ụgbọ elu, na-ekpughe ntuli aka nke ndị ahịa UK 1,000.
Ndị nọ n'ụdị afọ 25-64 fọrọ nke nta ka ha kewaa n'otu n'otu na nkwekọrịta ha, yana 73% nke 55-64; 74% nke 45-54s; 73% nke 35-44s na 72% nke 25-34s na-ekwu na ndị njem kwesịrị iyi ihe mkpuchi.
N'ime ọgbọ ndị na-eto eto, 62% nke 18-21s na 60% nke 22-24s kwenyere na ndị ụgbọ elu kwesịrị ịga n'ihu na-eme ka mkpuchi ihu bụrụ iwu.
Iwu maka iyi ihe mkpuchi ihu gbanwere na England na 19 Julaị, mgbe mmachibido iwu.
Kemgbe 19 Julaị, ọ bụghịzi iwu chọrọ iyi mkpuchi ihu n'ime ụlọ n'England, n'agbanyeghị Boris Johnson gbara ọha na eze ume ka ha gaa n'ihu na-ekpuchi ihu ha n'ime 'oghere juru na oghere'. Iwu mkpuchi ihu siri ike na-emetụta na Wales na Scotland.
Ọtụtụ ụgbọ elu, gụnyere Ryanair, EasyJet, TUI na Jet2 na-arụ ọrụ iwu mkpuchi ihu maka ndị njem niile gbara afọ isii na karịa, yana ndị ọrụ ụgbọ mmiri, ọ gwụla ma ewepụrụ ya.
Onye isi ihe ngosi WTM London Simon Press kwuru, sị: "N'ụzọ doro anya, n'agbanyeghị mmachi nke mmachi, ọtụtụ ndị mmadụ ka na-eche na ọ bụ ihe ziri ezi na ihe ziri ezi iyi mkpuchi ihu n'ụgbọ elu, kwekọrọ n'ụkpụrụ nke ọtụtụ ụgbọ elu."